YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, April 02
by Wira Thu (Notes) on Tuesday, April 2, 2013 at 1:49pm
ရက်စွဲ - ၁၃၇၄ ခု၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် (၇)ရက် (၂-၄-၂၀၁၃)
၂၀-၃-၂၀၁၃ ရက်နေ့မှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော မိတ္ထီလာမြို့ အဓိကရုဏ်မှစ၍ အခြားသော ကူးစက်အဓိကရုဏ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဓမ္မသဟာယကျောင်း၊ နာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝိစိတ္တာဘိဝံသ- အရှင်ဝီရသူ (မစိုးရိမ်)၏ သဘောထားအမှန်ကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာအပ်ပါသည်။
၂၀-၃-၂၀၁၃ ရက်နေ့ နယူးဝိန့်စိန် ရွှေဆိုင်မှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော မိတ္ထီလာမြို့အဓိကရုဏ်းသည် မည်သည့်အရောင်အသွေးနှင့် မည်သည့်ဘေးပယောဂမျှ မပါဝင်သော၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး စိတ်မထိန်းနိုင်၍ ဒေါသအလျောက် ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အဓိကရုဏ်းဟု ရှုမြင်ပါသည်။
အဓိကရုဏ်းကြီးမားပြင်းထန်စွာ တာရှည်သွားရခြင်းမှာ ခရီးသွားသံဃာတစ်ပါး သွေးမြေကျခဲ့ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပါမည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော တောင်ငူအဓိကရုဏ်းကြီးတွင်လည်း ဤကဲ့သို့ပင် သံဃာများသွေးမြေကျရာမှ စတင်ခဲ့ပြီး ကြီးမားပြင်းထန်စွာ ရက်ရှည်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ပဲခူးတိုင်း မြို့နယ်အချို့သို့ ကူးစက်ဖြစ်ပွားခဲသောအဓိကရုဏ်းများသည် အရောင်အသွေးနှင့် ဘေးပယောဂ ပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ လူအုပ်အင်အားဖြင့် အကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်သည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ငြင်းမရအောင် သိသာထင်ရှားသည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါအဓိကရုဏ်းများကြောင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ၏ အသက်၊ အိုးအိမ် စည်းစိမ်ဥစ္စာများ များပြားစွာ ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့ရသည့်အပြင် ၂၉-၃-၂၀၁၃ ရက်နေ့မှ စတင်ကျင်းပမည့် ဓမ္မာစရိယနှင့် ပထမပြန်စာမေးပွဲများ ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရခြင်းကြောင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး စာဖြေသံဃာ (၉၄၅၄၃)ပါးတို့၏ ပရိယတ္တိပညာရေးကိုလည်း ကြီးမားစွာ ထိခိုက်နစ်နာစေပြီး အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီခရီးအတွက်လည်း ခလုတ်ဆူးငြောင့်သဖွယ် အနှောက်အယှက်အဟန့်အတား များစွာဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသည်။
(က) သို့ဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ရေးကို ရှေးရှု၍ အပြစ်မဲ့ ခရီးသွားသံဃာတစ်ပါးကို လုပ်ကြံမိခဲ့ကြသော မွတ်ဆလင်းများကိုယ်စား မွတ်ဆလင်အဖွဲ့ချုပ် (အစ္စလာမ်သာသနာအဖွဲ့ချုပ်)ကြီးမှ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူများအား ပြန်လည်တောင်းပန်ရန် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
(ခ) ပဲခူးတိုင်းမြို့နယ်အချို့တွင် ဖြစ်ပွဲခဲ့သော အကြမ်းဖက် အနိုင်ကျင့်မှုများသည် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် မြန်မာလူမျိုးတို့ အရင်းခံစိတ်သဘောထားပုံရိပ်ကို ထိခိုက်နစ်နာစေသော ခွင့်မလွတ်နိုင်သည့် အမဲစက်ကြီး ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာ မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
(ဂ) ထို့အပြင် အဆိုပါ အကြမ်းဖက်သမားများကို ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်ပြီး၊ ထိုအကြမ်းဖက်သမားများကြောင့် စည်းစိမ်းဥစ္စာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော မွတ်ဆလင်များအား မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ကိုယ်စား ဦးပဉ္စင်းကပင် အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
(ဃ) ဤအခင်းဖြစ်ရာကာလအတွင်း ဘာသာ လူမျိုး မခွဲခြားဘဲ အတိဒုက္ခရောက်နေသူမှန်သမျှကို ဘုရားသားတော်ပီသစွာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးပီသစွာ မေတ္တာ ကရုဏာရှေးရှု၍ စာနာမှုအပြည့်အဝဖြင့် ကယ်တင်ကူညီခဲ့ကြသော ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးတို့အား ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
(င) ခေတ်မီဖွံဖြိုးတိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ခရီး သာယာဖြောင့်ဖြူးရေးနှင့် မကြာမီပြန်လည်ကျင်းပတော့မည့် ပရိယတ္တိစာမေးပွဲကြီး ချောမောစွာ ကျင်းပနိုင်ရေးကိုရှေးရှု၍ ရဟန်းသံဃာတော်များအနေဖြင့် ပဋိပက္ခများမပေါ်ပေါက်စေရန် ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တော်မူပါမည့် အကြောင်း ရိုသေလေးမြတ်စွာ လျှောက်ထားအပ်ပါသည်။
(စ) အမိမြန်မာပြည် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဘာသာပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးမူကို လက်ခံယုံကြည်သည့်အားလျော်စွာ လူမျိုးအချင်းချင်း ဘာသာအချင်းချင်း အပြန်အလှန် လေးစားယုံကြည်မှု ရှိကြရန်နှင့် သာမန်ပဋိပက္ခလေးများကို အမျိုးသားရေးပြဿနာအဆင့်မရောက်အောင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပူးပေါင်းဖြေရှင်း နှိမ်နှင်းပေးကြရန်လည်း အနူးအညွတ်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ဦးပဉ္စင်း ဝီရသူ(မစိုးရိမ်) ဘဒ္ဒန္တဝိစိတ္တာဘိဝံသ ဓမ္မသဟာယကျောင်းနာယက မစိုးရိမ်တိုက်သစ် မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မန္တလေး
(၂-၄-၂၀၁၃၊ ည ၁၁း ၁၂)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/02/20132အကြံပြုခြင်း
“ဦးဝီရသူကို ပြန်လည်ထိမ်းသိမ်းဖို့ စီစဉ်နေခြင်းလော”
25-3-2013-ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့နေ ရခိုင်လူငယ် ကိုရဲမင်းဦးကို ဖမ်းဆီးသွားပါသည်။
30-3-2013-ရက်နေ့ ဦးဝီရသူ MPC-အခမ်းအနား တက်နေစဉ် ဦးဝီရသူ၏ တပည့်တကာ တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးတင်ယုကို အခမ်းအနားထဲထိ ဝင်ခေါ်သွားပါသည်။ ထိုသို့ လူမဆန်သော ရိုင်းပြမှုကို မလိုလားသော သမ္မတရုံးဝန်ကြီးများမှ မေတ္တာရပ်ခံမှုကြောင့် ဦးတင်ယုကို(၃)နာရီကြာ စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး ပြန်ပို့ပေးခဲ့ပါသည်။ ၄င်းနောက် 31-3-2013-ည အချိန်မတော်ကြီးတွင် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ဝိမုတ္တိသင်္ကန်းတိုက်သို့ ဝင်ရောက်စီးနှင်းကာ ဦးဝီရသူ ရေးသားသောစာအုပ်များကို သိမ်းဆည်းသွားပါသည်။
၄င်းဝိမုတ္တိသင်္ကန်းတိုက်သည် ဦးတင်ယုအိမ်ဖြစ်ပြီး သိမ်းဆည်းခံရသော စာအုပ်များမှာ အကျဉ်းစံ အရှုံးသမား ဂျက်ဖာ(၈)ပုံး၊ သမိုင်းရဲ့တရားခံ ဂျက်ဖာ(၂)ပုံး၊ မြေခွေးလက်မှ လွတ်မြောက်လာသူ ဂျက်ဖာ(၁)ပုံးဖြစ်ပါသည်။
ဦးတင်ယု ရဲမင်းဦးတို့သည် ၉၆၉-(ရတနာသုံးပါးကို) ဦးထိပ်ထားသူများဖြစ်ကြပြီး ဦးဝီရသူ၏ တရားပွဲများကို မလွတ်တန်း စီစဉ်ကျင်းပ နာယူသူများဖြစ်ကြသည်။ လက်တစ်လော အဓိကရုဏ်းများကြောင့် နောက်ပြန်လှည့်မည်ကို စိုးရိမ်သော နိုင်ငံရေးသမားတို့က စစ်တပ်ကို ပုံချနေသောကြောင့် စစ်သားဝန်ကြီးများက ဦးဝီရသူနှင့် ၉၆၉-ကို ဦးထိပ်ထားသူများကို ထိုးကျွေးဖို့စီစဉ်နေမှန်းသိသာ ထင်ရှားပါသည်။ အစိုးရက ဖမ်းသည်ဖြစ်စေ၊ ကုလားက လုပ်ကြံသည်ဖြစ်စေ၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနှင့် ၄င်းတို့ခိုကိုးရာ ဘာသာရေး အဆောက်အဦးများကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုး လုံးဝမပြုလုပ်ကြဖို့ ဦးဝီရသူက သတိပေးလိုက်ကြောင်း သိရပါသည်။
“Islam Chitthu Lay သို့”
by Wira Thu (Notes) on Tuesday, April 2, 2013 at 8:02am
ဦးပဉ္စင်းသည် အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးတရား ဟောကြားနေသူမဟုတ်ပါ။ အစ္စလာမ်သာသနာကို မဆန့်ကျင်သလို ကိုရ်အန်ကျမ်းကိုလည်း လေးစားပါသည်။ (၂၀၀၁၊ ၂၀၀၂၊ ၂၀၀၃) ခုနှစ်တွေတုန်းက ကိုအန်ကျမ်းကို လေ့လာဖူးပါသည်။
(၂၀၁၂) ခုနှစ်တွင် ကရဝိက်ဦးမောင်မောင်က လက်ဆောင်ပေးထားသော ကိုရ်အန်ကျမ်းကိုလည်း ယခုအချိန်ထိ ဗီရိုပေါ်မှာ အမြတ်တနိုး သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ ကိုရ်အန်ကျမ်းကို လေးစားပါသည်။
ဦးပဉ္စင်းဟောကြားနေသည်မှာ အမျိုးသားရေးတရားတော်များ ဖြစ်ပါသည်။ ဦးပဉ္စင်းသည် မွတ်ဆလင်တွေကို မလိုလားသူလည်း မဟုတ်ပါ။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးမူကိုပဲ ကျင့်သုံးပါသည်။
ဦးပဉ္စင်းတရားထဲတွင်ပါဝင်သော မွတ်ဆလင်တွေအကြောင်း လေ့လာသင့်ပါသည်။ ဦးပဉ္စင်းဟောသလို ဦးပဉ္စင်းတို့ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စော်ကားမော်ကားပြုသူများမဟုတ်လျှင် ပြန်လည်ဖြေရှင်း တောင်းပန်ပါမည်။ ဦးပဉ္စင်းဟောကြားသည့်အတိုင်း မှန်ကန်လျှင် မိတ်ဆွေတို့ကလည်း ဝန်ခံခြင်း၊ တောင်းပန် ခြင်းများ ပြန်လည်ပြုလုပ်ရပါမည်။
ထို့အပြင် အသင်မိတ်ဆွေအား နမူနာမေးခွန်းတစ်ချို့ မေးပြလိုက်ပါသည်။
၁။ မိန်းကလေးဖြစ်စေ၊ ယောက်ျားလေးဖြစ်စေ သင်တို့မွတ်ဆလင်တွေနှင့် ညားသည့်အခါ အစ္စလာမ်ဘာသာထဲသို့ အတင်းအဓမ္မ သိမ်းသွင်းနေသူများကို သင်တို့ အစ္စလာမ်အဖွဲ့ချုပ်က အဘယ်ကြောင့် အရေးမယူဘဲ မသိကျိုးကျွံ ပြုနေပါသနည်း။
၂။ အစ္စလာမ်မကိုးကွယ်ဘဲ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုးကွယ်သူများကို အဘယ့်ကြောင့် သတ်ဖြတ် ပစ်ရပါသနည်း။ (၂၀၀၃၊ မုံရွာမြို့မြောက်ဘက်၊ အလုံမြို့လေးမှ မစုစုလတ်ကို ရာဇင်နှင့်မိသားစုက အင်္ဂါဇာတ်ကို ဓားနဲ့ ထိုးသတ်ခဲ့သည်။)
၃။ အစ္စလာမ်ထဲသို့ ကြောက်၍ဝင်ရသော်လည်း ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ဘုရားသွားကျောင်းတက်၊ ဥပုသ်စောင့်သူကို အဘယ့်ကြောင့် နေ့စဉ်ညှဉ်းဆဲ ရက်စက်ရပါသနည်း။ (၂၀၁၃- ကလေးမြို့မှ မဝါဝါမြင့်)
၄။ အိမ်ရှင်တိုင်းရင်းသားများက သဘောထားကြီးမားပါလျက် မွတ်ဆလင်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကို ဘာကြောင့် ခါးခါးသီးသီး မုန်းတီးနေကြပါသနည်း။ (ရခိုင် နှစ်ကြိမ် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဦးပဉ္စင်းတရားထဲမှာပါသော မွတ်ဆလင်အချို့)
၅။ မွတ်ဆလင်နှင့်ညားသော မြန်မာအမျိုးသမီးများကို ဘာကြောင့် စစ်သုံ့ပန်းလို ဆွေပြတ်မျိုးပြတ် အဆက်ဖြတ်ထားရပါသနည်း။
၆။ အဆိုပါအမျိုးသမီးများကို ဘာကြောင့် ဘူခါခြုံခိုင်းရပါသနည်း။ အမီနာ၊ အစီနာ နာမည်များ မည့်ခေါ်ထားကြပါသနည်း။
၇။ လိမ္မာယဉ်ကျေးသော အဆိုပါမိန်းကလေးများ မွတ်ဆလင်လက်ထဲရောက်မှ အဘယ့်ကြောင့် ကြမ်းတမ်း ရိုင်းပျမောက်မာ သွားကြပါသနည်း။
၈။ မြန်မာတိုင်းရင်းသား မိဘများက သဘောမတူ မကြည်ဖြူလို့ ငိုယိုပြန်တောင်းသည့်အခါမျိုးမှာ သမီးနှင့် ဘာကြောင့် တွေ့ခွင့်မပေးပါသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် မိဘချင်း ကိုယ်ချင်းမစာ လက်ထပ်စာချုပ်ပြပြီး ဗလီထဲဝင်ခွင့် သမီးနှင့် တွေ့ခွင့် မပေးပါသနည်း။
၉။ ဝက်သားစားသောတိုင်းပြည်မှာ နေထိုင်သောသင်တို့သည် ဝက်သားကို ခါးခါးသီးသီးမုန်းပါလျက် ဝက်သားစားသော မြန်မာအမျိုးသမီးများကို ဇွတ်ရော အတင်းရော အဓမ္မရော အဘယ့်ကြောင့် သိမ်းပိုက်နေကြပါသနည်း။
၁၀။ ရဟန်းသံဃာများက မကြိုက်မှန်းသိပါလျက်၊ မိဘပြည်သူများက မကြည်ဖြူမှန်းသိပါလျက် မြန်မာမိန်းကလေးများကို ပစ်မှတ်ထားသိမ်းပိုက်နေခြင်းကို သင်တို့ အစ္စလာမ်အဖွဲ့ချုပ်က ဘာကြောင့် လက်ပိုက်ကြည့်နေပါသနည်း။
၁၁။ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်မှုကို ရက်ရက်စက်စက် ပက်ပက်နှက်နှက် မိုက်မိုက်မဲမဲ ချိုးဖောက်နေသည့် မွတ်ဆလင်များကို ကိုရ်အန်ကျမ်းက ခွင့်ပြုထားပါသလော။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/02/20130အကြံပြုခြင်း
နျူကလီယား စက်ရုံတွေ ပြန်ဖွင့်ဖို့ မြောက်ကိုရီးယား ပြင်ဆင်၊ခြိမ်းခြောက်မှု အမေရိကန်လုံးဝ လက်မခံနိုင်။
မြောက်ကိုရီးယား ခြိမ်းခြောက်မှု အမေရိကန်လုံးဝ လက်မခံနိုင်။
ဓါတ်ပုံ Thar Htay
The First Weekly Journal အားလက်ပံတောင်းဒေသတုံရွာမှ မညိုလေးက အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲ
The First Weekly Journal တွင်မြောက်ဒဂုံတွင်နေထိုင်ပြီး နိုင်ငံရေးအမှုနှင့်ထောင်မှထွက်လာ သည်ဟုရေးသားဖော်ပြခံရသည့် ဓာတ်ပုံရှင်အမျိုးသမီးမှာ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးမုံရွာခရိုင်၊ဆားလင်း ကြီးမြို့နယ်၊ တုံရွာတွင်နေထိုင်ပြီး တုံရွာတွင်ပင်မွေးဖွားကြီးပြင်းလာ ကာနိုင်ငံရေးမှုဖြင့်ထောင်ကျခဲ့ခြင်း မရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည့် အတွက် The First Weekly Journal ရေးသားဖော်ပြမှုမှာ သူမ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကိုညှိုးနွမ်းစေသည့် အပြင် စာမျက်နှာပေါ်တင်၍ အရှက်ခွဲသလိုဖြစ်နေခြင်းကြောင့် တုံရွာသူ ဒေါ်ညိုလေးမှာ ဆားလင်း ကြီးတရားရုံးတွင် ဧပြီ ၁ရက်က တရားရုံးသို့ ဦးတိုက်လျှောက်ထား ၍ အမှုဖွင့်သည်ကို သက်သေစစ် ဆေးပြီး တရားရုံးကအမှုဖွင့်သည် ကိုလက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကာယကံရှင် ဒေါ်ညိုလေးထံမှ သိရသည်။
““ကျွန်မကို မတရားစွပ်စွဲပြီး သတင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာဖော်ပြ ခဲ့တဲ့အတွက် အသေရေဖျက်မှုနဲ့ တရားစွဲတာပါ။အမှားပြင်ဆင်ဖော် ပြပေးရင်လည်း ကျွန်မကလုံးဝ မကျေနပ်ဘူး၊တရားဥပဒေကဆုံး ဖြတ်ပေးတာကိုလက်ခံသွားမယ်”” တုံရွာတွင် မွေးဖွားကြီးပြင်လာ သည့် ဒေါ်ညိုလေးမှအတည်ပြု ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ တုံရွာမှဒေါ်ညိုလေး က The First Weekly Journal အားတရားဆွဲစိုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဆိုပါဂျာနယ် ဖုန်း-၀၁-၃၇၈၀၉၀အားဆက်သယ်မေးမြန်း ရာ ““အယ်ဒီတာ ဦးအောင်စိုးသူ မရှိကြောင်း၊ ဦးအောင်စိုးသူ၏ ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းပေး၍မရ ကြောင်း၊တွေ့ရင်တော့ အဆိုပါ ကိစ္စအားပြောပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း”” ယင်းဂျာနယ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ် ဦးက ဧပြီ ၁ရက် နေ့လည် (၃) နာရီတွင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကို ဖြေဆိုခဲ့သည်။ ဆားလင်းကြီး တရားရုံးမှ ဒေါ်ညိုလေး၏တရား ဆွဲမှုကိုလက်ခံပြီးရုံးသို့ ၅ရက်လျှင် ပြန်လာခိုင်းထားကြောင်း၊ ထိုနေ့ မှ ပုဒ်မကိုတပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်ညိုလေးထံမှထပ်မံသိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ၄၈ လမ်းဗလီမှ စာသင် ကလေးငယ် မောင်ဝေယံသူ (အသက် ၁၄နှစ်)၊ မောင်မောင်ဇော်၊ မောင်မျိုး အောင်တို့မှ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပုံအဖြစ် မှန် များကို ထုတ်ဖော်ပြောပြခဲ့သောကြောင့် ဧပြီလ ၂ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ၄၈လမ်း ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်း ဗလီ မီးသင့် လောင်ကာ လူသေဆုံးမှု၏ အများက စိတ်ဝင်စားနေသော အဖြစ်မှန်ပေါ် ပေါက်သွားခဲ့ပြီဟု ဧပြီလ ၂ရက်နေ့ ညနေက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင်ပြုလုပ်သည့် စာ နယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲမှ သိရသည်။ တိုင်း ဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနှင့် လုံခြုံရေး နှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးတို့က ရှင်းလင်း ပြောပြရာတွင် ဝေယံသူ(အသက် ၁၄နှစ်)မှာ မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့သော မီးအားမြင့်စက်ဘေးတွင် အိပ်စက်ခဲ့ ကြောင်း၊ အဆိုပါ ၄၈လမ်းဗလီတွင် လွန် ခဲ့သော ၂ရက်ခန့်က ရောက်ရှိလာကြ သော ဘာသာရေးစာသင်မည့် ကလေး ငယ် ၇၀ကျော်ကို အပေါ်ထပ်တွင် ကလေး ၁၃ဦး၊အောက်ထပ်တွင် ကလေး ၅၀ကို ဗလီဆရာ ဇေယျာဖြိုးခေါ်၊ မိုဟာ မက်အူလဟွာ နေရာချထားပေးခဲ့ရာ၊ ဧပြီလ ၂ရက်နေ့ နံနက် ၃နာရီခန့်တွင် မောင်ဝေယံသူအိပ်နေသော နေရာဘေး က မီးအားမြင့်စက်မှ အသံများဆူညံစွာ မြည်လာပြီး မီးခိုးများထွက်လာသော ကြောင့် ဗလီဆရာဇေယျာဖြိုးနှင့် အခြား လူကြီးများကို ပြေးနှိုးသော်လည်း မနိုး ကြကြောင်း ထို့ကြောင့် စောင်များနှင့် ၀ိုင်းအုပ်ကြကြောင်း မီးမသေဘဲ မီးခိုး များ အူထွက်လာပါကြောင်း ထို့နောက် ဗလီဆရာဇေယျာဖြိုးနိုးလာပြီး စောင် များကို ဗလီတွင် သန့်ရှင်းရေးဆေးကျော သော ရေအိုးမှ ရေများကို ဆွတ်ပြီး မီးလောင် နေသောနေရာကို အုပ် ခဲ့ကြောင်း၊ မီးအားမြင့်စက်အောက်မှ ဒီဇယ်ငါးဂါလံပုံး လဲမှောက်ပြီး မီးလောင် နေသောကြောင့် စောင်များ ဖြင့်အုပ်သော်လည်း မီးငြိမ်းမသွားဘဲ မီး ခိုးများအူထွက်လာပြီး အပေါ်ထပ်တွင် အိပ်နေကြသော ကလေး ၁၃ဦးလုံး သေ ဆုံးကုန်ကြောင်း၊ အောက်ထပ်မှ ကလေး ၅၀ မှာ မည်သည့်ဒဏ်ရာမှမရကြောင်း ဗလီဆရာ ဇေယျာဖြိုးခေါ် မိုဟာမက် အူလ၀ါမှ ဗလီမီးလောင် လူသေဆုံး မှု မှာ သူ၏အမှားမှားအယွင်းယွင်း ဆောင် ရွက်မှုများဖြစ်သော အပေါ်ထပ်မှကလေး များကို တံခါးသော့ခတ်ထားမိခြင်း မီးငြိမ်းသက် ရာမှ ထွက်လာသောမီးခိုးများကြောင့် အပေါ်ထပ်မှ ကလေး ၁၃ဦး သေဆုံး ကုန်ကြခြင်း၊ ရှော့ဖြစ်သည့် မီးအား မြင့် စက်အောက်မှ ဒီဇယ် ငါးဂါလံပုံးမှာ ဗလီ မှ ၂၅ကီလို မီးစက်အတွက် လာပို့နေကြ ဒီဇယ်ရောင်းချသူကပို့ထားသော ဒီဇယ် များဖြစ်နေပြီး ပေါ့လျော့စွာ မီးအားမြင့် စက်အောက်၊ လှေကားအောက်တွင် ထားခဲ့ခြင်း ဗလီဆရာဇေယျာဖြိုး၏ပုဆိုး ၏ ပေကျံနေသော ဒီဇယ်များမှာ သူထား သောဒီဇယ်များသာဖြစ်နေခြင်း၊ သူခြေချော်လဲသော ဒီဇယ်မှာလည်း ထို ဒီဇယ်များသာဖြစ်နေခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကြီးမားသည့်ဆိုးကျိုးများ ကို မိမိအပေါ်မကျရောက်စေရန် ဘေးကလာစီစဉ်ထားသလို ထင်ရောင် ထင်မှားစကားများကို လိမ်လည်ပြောဆို မိကြောင်းကိုလည်း သက်သေများ၏ရှေ့ တွင် ထွက်ဆိုချက်ပေးပြီးဖြစ်သောကြောင့် မည်သူမျှလာရှို့သောမီးမဟုတ်ဘဲ သဘာ ၀အလျှောက် မီးအားမြင့်စက်မှလောင် ကျွမ်းသောမီးကို ကြောက်လန့်တကြား စောင်အုပ်ပြီးငြိမ်းနေစဉ် ဒီဇယ်များကိုပါ မီးလောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မီးခိုးများ အူထွက်လာသောကြောင့် အပေါ်ထက် မှ ကလေးများ မီးခိုးမှိုင်းများ သေဆုံးကုန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ (အကယ်၍ သာအပြင်က မီးလာရှို့ခြင်း ဆိုလျှင် သော့ခတ်ထားသော တံခါးကို ဒီဇယ်ပုံးက မ၀င်နိုင်ပါကြောင်း၊ ယနေ့ အချိန်ကာလ ရပ်ကွက်တိုင်းတွင် နှိုးကြား စွာကင်းစောင့်နေကြချိန်တွင် မည်သည့် လူစိမ်းကမျှ ဒီဇယ်ပုံးကြီးကို ညအချိန် ကြီးမှာ ဆွဲယူလာရန်မဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း၊ မီးရှို့မည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် သတိထားနေချိန်မို့ ဘေးကလာတာ မဖြစ်နိုင်သည့်အပြင် အကြံသမားမီးရှို့ သူသည် ဒီဇယ်ကိုမသုံးပဲ ဓာတ်စီကိုသာ သုံးမည်ဟု တွက်ဆနိုင်ကြောင်း၊ ယခု အခါတွင် မျက်မြင်သက်သေကလေးများ ၏ အဖြစ်မှန်ဖေါ်ထုတ်ပြပေးသော ကြောင့် ဗလီဆရာ ဇေယျာဖြိုးမှာလည်း သက်သေများ၏ရှေ့တွင် ၀န်ခံရပြီဖြစ်ပါ ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး မီးလောင်ဗလီမှ ထပ်မံသိမ်းဆည်းရခဲ့သည့် မီးလောင် ထားသော ဒီဇယ်ပုံးကို သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်းတာဝန်ရှိသူများကို ပြသခဲ့ပါ သည်။ မီးကိုဖုံးအုပ်ငြိမ်းသတ်ခဲ့သည့် ဒီဇယ်ပေနေသော စောင်ကိုလည်း ထုတ် ဖေါ်ပြသခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ ၄၈လမ်းဗလီမီးလောင် ကာလူသေဆုံးမှုကို ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမလိုလားကြသော လူများက အင်တာနက်မှတဆင့် မမှန်သ တင်းများကို ပြန်တူးနေကြသောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အထင်အမြင်လွဲမှု များဖြစ်ပေါ်နေရာသတင်းနှင့်စာနယ် ဇင်းမှ တာဝန်ရှိသူများမှတစ်ဆင့် ပြည် သူများကိုလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာ စာမျက်နှာသို့လည်းကောင်း အမှန် အတိုင်းတင်ပြ နိုင်ရန် ခေါ်ယူရှင်းလင်းရ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါ သည်။
သေဆုံးသူ အစ္စလန် ဘာသာဝင် ကလေး များကို ရေဝေးသုသန် မှာ ဒီနေ့ ၈၈ ခေါင်းဆောင် များလိုက်ပါပို့ ဆောင်
အကြမ်းဖက်အဓိကရုဏ်းလက်သည် ဘယ်သူလဲ? ဖေါ်လိုက်ပြီ(နိဂုံးပိုင်း)
သား ၃ ယောက်တွင် ၂ ယောက်သည် မဟာဘောဂ စီးပွါးရေးသမားကြီးများဖြစ်ပြီး အငယ်ဆုံးသားဖြစ်သူကတော့ ဘိုတော်ရောဂါထကာ အင်းအစီရင် ယာတြာနှင့် င်္အဂိရ ဖိုထိုးခြင်းများ ပြုလုပ်လေ၏။ ၄င်း၏ အ၈္ဂိရ ဖိုထိုးသောဒေသများသည် ယခု နေပြည်တော် မတည်ကပင် သွားရောက်စခန်းဝင်လေ့ ရှိခဲ့သော လယ်ဝေး ပျဉ်းမနား၏ အနောက်ဘက် တောင်တန်း တောတန်းများတွင် အများဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
ရခိုင်အရေးခင်း မပေါ်ပေါက်ခင်ကလေးမှာပင် ကျောက်နီမှော်ရွာမှ မသီတာထွေးမုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရသော ကာလနှင့် တဆက်တည်းမှာပင် တရုတ်ဂစ်ပိုက်လိုင်း လုံခြုံရေးအတွက်နှင့် ယာတြာတို့အတွက်ပါ အစ္စလမ်ဘာသာဝင် ၁၀ဦးအား သတ်ဖြတ်လိုက်သောမြို့နယ်သည် မ နှင့်စသောမြို့ (၁)မောင်တော ဖြစ်လေသည်။ထိုနောက် (၂)မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မင်္ဂလာဈေးအား မီးရှို့ပြာချလိုက်သည်။ ထိုနောက်(၃) မော်လမြိုင် ဈေးကြီးအား မီးလောင် ပြချကြပြန်သည်။ ထိုနောက်(၄) မြစ်ကြီးနား မိုင်ဂျားယန်ကို ထိုးစစ်ပြုလုပ်သည်။
ထိုနောက်(၅) မန္တလေး တိုင်းတွင် တရုတ်တဦးက မြန်မာ အမျိုးသားတဦးအားလက်သီးနှင့် ထိုးကြိတ်သော ပြသနာ လုပ်ပြပြီး ထိန်းကွပ်ပြသသည်။ ထိုနောက် (၆)မုံရွာ လက်ပံတောင်း အရေးခင်း အစပျိုးရန် ဦးအောင်မင်းတို့မှ အကြောင်းမဲ့သွားရောက်က တရုတ်ကြေးဇူး ဆပ်ရမည်ဟု မီးစထိုးလိုက်သည်။ ထိုနောက်(၇) မအူပင်မြို့နယ် မလက်တိုရွာ အေ၇းခင်း ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ထိုနောက်(၈) မိတ္ထီလာမြို့ အဓိကရုဏ်းဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ထိုနောက် (၉)မလှိုင်မြို့တွင် နေခင်းကြောင်တောင် အကြမ်းဖက်မှုပြုလုပ်ပြသည်။ ထိုနောက်(၁၀) မင်းလှတွင် ထပ်မံအကြမ်းဖက်မှု လုပ်ကြပြန်သည်။ မင်းလှ အကြမ်းဖက်မှုပြီးမှသာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ မိတ်ခွန်း မတ်လ (၂၈)တွင်ထွက်လာခဲ့တော့သည်။
မိတ္တီလာ အရေးခင်းအား ဖေါ်ပြရပါမူ ရွှေဆိုင်တဆိုင်မှ အရောင်းဝယ်ကြောင့် ပြသနာစဖြစ်သည်ဟု အကြမ်းမျဉ်းနားလည်ကြသည်။ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ၄င်း မတ်လ ၂၀ ရက် နေ့ခင်း ၁၂ နာရီ ၂၀ တွင်မှာပင် သံဃာတော်တပါးအား ဓါးဖြင့်ခုတ်ကာ မီးရှို့ရန် လုပ်သော မူဆလင်ရပ်ကွက်တခုက ထပ်ဖြစ်လာသည်ဟု ဖေါ်ပြကြပြန်သည်။ ထိုနောက် တစတစ ရန်မီးကြီးထွားလာခဲ့ပြီး မိထ္တီလာ အဓိကရုဏ်း ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
မိတ္ထီလာအဓိကရုဏ်းစဖြစ်သော အချိန်တွင် နယ်ထိန်း ဒုရဲအုပ် ၀င်းမောင်မှ သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြောင်းကြားသည်။ သို့သော် ဆက်လက်တင်ပြပေးလိုက်မည် အခြေအနေကိုသာ အသေးစိတ်စောင့်ကြည့်ရန် ညွန်ကြားသည်ဟု ၄င်းက ဆိုသသည်။ ညနေရောက်လုလုတွင် ကြီးကြီးမားမား လူအုပ်ကြီးများဖြစ်လာခဲ့ပြီး မီးတင်ရှို့သော ဇာတ်လမ်းများဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ ၄င်းဒေသတွင်းမှ ရဲအင်အား ၁၅၀ ခန့် လက်နက်အပြည့်စုံဖြင့် လမ်းပိတ်ဆို့မှုများ ပြုလုပ်ပေးပြီးဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက် မရှိကြတော့ပဲ ပိတ်မိသူက ပိတ်မိကာ သတ်ပွဲများ တညလုံးကျင်ပနေခဲ့ကြသည်။
၄င်းတို့ဌာနများနှင့် တပ်သားသစ်များအာ ညအချိန် ခရာမှုတ်ကာ လူစုပြီး ကုမ္မဏီများပိုင်သော မြေသယ်ကားကြီးများဖြင့် ခေါ်ဆောင်လာပြီး အလျှင်မြန်ဖျက်ဆီးစေသော သတင်းမှာ အပြင်သို့ ပေါက်ထွက်ေ၇ာက်ရှိလာခြင်း မရှိသေးကြောင်း တင်ပြရင်း အကြမ်းဖက်အဓိကရုဏ်းလက်သည် ဘယ်သူလဲ? ဖေါ်လိုက်ပြီ ဆောင်းပါးအား အသေခြာ ဖတ်ရှု့ပါက ရှင်းလင်းစွာ တွေ့မြင်နိုင်ပါကြောင်း……………………….
စာဖတ်သူအပေါင်း စစ်ဘီလူးများ ဖန်တီးလှည့်ဖြားသော ဘေးအန္တရာယ် လှည့်ကွက် အသွယ်သွယ်မှ ကင်းဝေနိုင်ကြပါစေ။
အကြမ်းဖက်အဓိကရုဏ်းလက်သည် ဘယ်သူလဲ? ဖေါ်လိုက်ပြီ(ပထမပိုင်းဖတ်ရန်)
အခုdutyကအပြန် လမ်းမှာလူတွေပြောနေကြတယ်။ မီးကွင်းပစ်တာတဲ့။ လှေကားမှာဓာတ်ဆီတွေလောင်းထားတယ်တဲ့။ကျွန်တော်နေတာကပန်းဘဲတန်းဆိုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့။ အဆိုးဆုံးက အိမ်ရောက်လို့ facebook လည်းဖွင့် ရော internationalမှာပါ ကောလဟာလတွေအပြည့်ပဲ။အရမ်းစိတ်ပျက်ဖို့...ကောင်းတယ်။ အဖြစ်မှန်ကိုလူတွေသိစေချင်တယ်။
ကျွန်တော် မနေ့ကအရေးပေါ် ERC2 dutyကျတယ်။ မနက် ၃နာရီ ခွဲလောက်မှာ ဗလီတစ်လုံး မီးရှို့ခံရလို့ဆိုတဲ့သတင်းစဝင်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို အစိုးရဋ္ဌာနတွေတောင် ကောလဟာလသတင်းက စဝင်လာတာပြော့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ပထမလုံးဝမယုံဘူး။ april fool လို့ပဲထင်တာ။နောက် eleven က internet သတင်းတက်လာတော့မှအကုန်လုံးလန့်ဖြန့်ပြီး ကြိုတင်ပြင်စရာရှိတာတွေပြင်ကြတယ်။ house surgeon လေးတွေကော emo , ဆရာမတွေကော အလုပ်သမားတွေကောပေါ့။drip line တွေ ထရော်လီတွေ maskတွေ အကုန်အစုံအလင်နဲ့ ကိုယ်တွေတတ်နိုင်သလောက်ပြုစုကုသပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားကြတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ ရည်မှန်းချက် မပြည့်မြောက်ခဲ့ပါဘူး။ ရောက်လာသမျှကinjury patient တစ်ယောက်မှမပါပဲ အကုန်လုံး dead body ချည်းဖြစ်နေလို့ပါ။ ၄နာရီ ၂၀မှာ body ၄ခုစရောက်တယ်။ နောက်တစ်ခေါက် က ပစ်ကပ်ကားနဲ့ ၆ခု ။နောက်ဆုံး တစ်ခေါက်က ၃ခု စုစုပေါင်း ၁၃ ခု ရောက်ပါတယ်။ ထူးခြားတာက မီးသတ်ကားတွေ ရဲကားတွေ လူနာတင်ယာဉ်တွေအကုန်လုံးက ဥသြသံလုံးဝ မဆွဲပဲ စည်းကမ်းတကျဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။ သူတို့နဲ့အတူတူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ယောက် ၄၀ လောက်လည်းပါလာပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုမေးတာပေါ့။ မီးသတ်ကတာဝန်ရှိသူတွေကော ရဲတွေကိုကောပေါ့။ သူတို့ကသေချာရှင်းပြကြပါတယ်။ ဗလီဆရာက ညအိပ်ခါနီးတိုင်းလူစစ်ပါတယ်တဲ့။ မနေ့ညက ၇၀ ရှိပါတယ်တဲ့။ အခု ၁၃ ယောက်ဆုံးပါးသွားပြီး ၅၃ယောက်ကို ကယ်ထားနိုင်ပြီး ၄ယောက်ပျောက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ မီးအားမြှင့်စက်က ဝါယာရှေ့ာဖြစ်ပြီး လှေကားနဲ့ စက်က ကပ်နေပြီး လှေကားကိုမီးကူးတာပါ။ အဲဒီလှေကားက ထပ်ခိုးကိုတက်တဲ့လှေကားဖြစ်ပြီး ထပ်ခိုးမှာအိပ်တဲ့ ကလေး၁၃ယောက်လုံးပိတ်မိသွားတာပါ။ထပ်ခိုးက လေးဘက်လေးတန် အလုံပိတ်ဖြစ်ပြီး မီးလောင်တဲ့လှေကားတစ်ခုပဲထွက်ပေါက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဘယ်လိုမှကယ်လို့မရဘူးလို့ မီးသတ်ဗိုလ်ကြီးကပြောပါတယ်။ သူတို့မှာအထောက်အထားဓာတ်ပုံတွေအကုန်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းပါလာတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တော်တော်များများကိုလိုက်မေးကြည့်ပါတယ်။ သူတို့ကလည်းဒီအတိုင်းပဲပြောကြပါတယ်။ ဗလီကျောင်းကတာဝန်ရှိလူကြီးတွေလည်းပါလာပြီး သူတို့လည်းဒီလိုပဲပြောကြပါတယ်။ ဘယ်သူမှရှို့မီးတို့ မီးကွင်းပစ်တာတိုံ့မပြောကြပါဘူး။ သူတို့ ကိုယ်တိုင်က အဲဒါမျိုးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ တံခါးကသော့ခတ်ထားတာဖြစ်ပြီး အထဲက စလောင်တာလို့ပြောကြပါတယ်။ ကျန်တော်နဲ့တူတူdutyကျတဲ့ team leader ကော နောက် ရောက်လာတဲ့ FA ကောကလည်း အစ္စ လာမ်တွေပဲဆိုတော့ သူတို့လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သေချာအောင် အကုန်လုံးကိုသေချာအောင်လိုက်မေးကြည့်ထားတာပါ။ ဆေးရုံလုံခြုံရေး အတွက်တံခါးပိတ်ထားတာကို တချို့တွေ အတင်းဖွင့်ခိုင်းလို့ကတောက်ကစဖြစ်တာကလွဲလို့ ဘာမှပြသနာကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ပါဘူး။အဒီတော့ ဒါရှို့မီးမဟုတ်ူးဆိုတာ နားလည်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သက်သေအနေနဲ့ င်္မီးသတ်တွေ ရဲတွေ ဆေးရုံကဆရာဆရာမတွေ အလုပ်သမားတွေ အတူတူပါလာတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ဗလီကတာဝန်ရှိသူတွေရှိကြပါတယ်။
အခုတော့ဗျာ ကောလဟာလတွေကဆိုးလွန်းအားကြီးပါတယ်။လူတွေက ဘာတွေဖြစ်ချင်နေကြတာလဲ။ လူတွေပါးစပ်က စည်းကမ်းမဲ့လွန်းအားကြီးပါတယ်။ အပြစ်မဲ့ ပြီးသေဆုံးသွားတဲ့ ကလေး ၁၃ ယောက်ရဲ့ အသက် ၁၃ ချောင်းကို အသုံးချပြီး အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဘာသာရေးသွေးကွဲမှုတွေ အုံကြွမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ ပြောနေတဲ့ ရေးနေတဲ့ လူတွေရဲ့လုပ်ရပ်တွေကတော့ အောက်တန်းကျလွန်းအားချည်းပါတယ်။
ကျွန်တော် ဒီလို statusမျိုးရေးလေ့ရေးထမရှိပါဘူး။ အခုရေးရတာကလည်းကိုယ်သိတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကို ပြောရမယ့်ဝတ္တရားရှိတယ်လို့ ခံယူထားလို့ပါ။ လူတိုင်းအမှန်ကိုသိအောင်မစွမ်းဆောသ်နိုင်ပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော့်ရဲ့ fb account မှာရှိတဲ့ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေတော့ အမှန်ွသိသင့်တယ်ထင်လို့ပါ။ လူတိုင်း ကောလဟာလဘေးမှကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။
............................................. ဆန့်ကျင်ဖက်သတင်းတချို့ဖတ်ချင်သေးရင်.... ================================ "ဗလီမီးရှို့ခံရမှုက အကြမ်းဖက်သမားများ ရန်ကုန် ကိုရောက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြနေပါတယ်။" http://komoethee.blogspot.ca/)